Kedu ka m si mara na onye nhazi m na akwado 64 ibe n'ibe? | Site na Linux
Kedu ka m si mara na onye nhazi m na akwado 64 ibe ya?
Nke a bụ esemokwu nke wetara ọtụtụ mgbagwoju anya n'etiti ndị ọrụ. Ọbụna mgbe ha chere na ha maara azịza ya, ha na-ehie ụzọ mgbe mgbe.
Ọ dị ka ọ bụ ihe amamihe dị na ya iweta ya ugbu a n'ihi ọhụụ Ubuntu 10.04 na Fedora 13 na-esote. Dị ka anyị niile maara, ọtụtụ nkesa Linux nwere nsụgharị kachasị maka ndị nhazi 64 bit. Nke a bụ ebe nsogbu anyị bilitere: Igwe m ọ ga - akwado 64 bit? Enwere m ike ibudata ụdị 32 bit naanị? Na ajụjụ na-aga n'ihu ...
Tupu ịmalite ikpughe ihe omimi ndị a, ka anyị dokwuo anya na iji mepụta ule ndị anyị ga-eme ebe a, ọ dị mkpa na ị nwere Linux (distro ọ bụla) arụnyere na igwe ahụ. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ịgbanye iwu ndị a site na ịmalite Linux site na LiveCD.
Ka anyị bido site ịmata ọdịiche dị n’etiti ịmata ihe ngwaike gị na-akwado n’ezie yana ụdị kernel ị na-agba na ngwaike ahụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ma ị ngwaike akwado 64 bit, imeghe ọnụ na-agba ọsọ:
grep ọkọlọtọ / proc / cpuinfo
Ọ bụrụ na lm pụtara na nsonaazụ, mgbe ahụ ọ na-akwado 64 bit; ma ọ bụrụ na echedo ọnọdụ na-egosi, ọ na-akwado 32 bit; ma ọ bụrụ na Real Mode egosi, ọ na-akwado 16 bit.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ma ị kernel ugbu a akwado 64 bit, imeghe ọnụ na-agba ọsọ:
Ọ bụrụ na "x86_64 GNU / Linux" pụtara na nsonaazụ, ọ na-egosi na ị na-agba ọsọ kernel 64 bit. Kama, ọ bụrụ na ị hụ “i386 / i486 / i586 / i686”, ọ bụ kernel 32 bit.
Mgbe ị ga-ekpebi ụdị Ubuntu, Fedora ma ọ bụ distro ọ bụla ibudata, ihe dị mkpa bụ nke mbụ n'ime iwu ahụ, ebe ọ na-egosi ma ngwaike gị na-akwado 64 bit.. Iwu nke abụọ na-agwa gị ụdị kernel ị rụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Kedu ka m si mara na onye nhazi m na akwado 64 ibe ya?
fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtesther64 monitor ds_cmsssmcss
N'ihi ya, m na-agba ọsọ 64-bit system 😀
Na nsonaazụ nke ịkekọrịta, edepụtara ya «lm», dị ka egosiri na post.
Nke ahụ pụtara na oge ọzọ ịnwere ike ibudata ụdị 64-bit nke ọkacha mmasị gị kachasị amasị ma wụnye ụdị ahụ. Nke ahụ ga - abụ, a pụrụ ikwu, “atụ aro” ahụ sitere na ngwaike i nwere.
mma m gbaara "grep flags / proc / cpuinfo" ma nweta ihe ndị a:
fpu vme pse tsc msr Pae mce cx8 apic mtrr PGE mca cmov kutu PSE36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb RDTSCP LM 3dnowext 3dnow constant_tsc elu NONSTOP_TSC extd_apicid pni monitor CX16 popcnt lahf_lm SVM extapic cr8_legacy abm SSE4A 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr npt lbrv svm_lock nrip_save
Ana m agba kubutu 10.4 nke ọma ma aghọtaghị m na a bụ m ihe ọhụrụ maka Linux mana kọmpụta m nwere amd ma ha gwara m na amd na-akwado ụdị 32 na 64.
ajụjụ a bụ m nwere ike ibudata nsụgharị 64 bit? (Ana m eji 32-bit otu)
Ee, ọ bụrụ na laptọọpụ gị na-ekwu na mpụga AMD, ọ pụtara, na ị nwere ike iwunye ụdị ọ bụla nke 64bit distros
Ezigbo ozi, daalụ nke ukwuu. Ana m agwa gị na nsonaazụ nke iwu nke abụọ gara nke ọma, m na-agba ọsọ na kernel 64. Ma na iwu mbụ m nwetara nke a: ị nwere ike ịkọwa ihe na - eme biko
messianico @ barsa-desktọọpụ: ~ $ grep flags / proc / cpuinfo
ọkọlọtọ: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cx ssse ht tm pbe syscall nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl dpltesm vm64prm monitor ps2 est_dpltesm3prm monitor pdcm xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
Ekele na ekele!
Dịka ị pụrụ ịhụ, lm na-egosi mgbe ị na-eme iwu mbụ, mgbe ahụ ị nwere ike, ma n'eziokwu ị na-eme, na-agba ọsọ 64-bit Linux. 🙂
Anọla m na linux a otu izu. Otu izu kpụ ọkụ n'ọnụ "na-amụ" (M na-agụ 10 consecutive posts na peeji a, nke dị ezigbo mma!). O juru m anya ịhụ na dịka nke a laptọọpụ m na-akwado kernel 64-bit.
M na-agụ ndụ m: Ọ bụ hp530 site n’ihe dị ka afọ 6 ma ọ bụ 8 gara aga, o nwekwara 1Gb nke RAM. Ihe ngwa ngwa na-agba ọsọ ọsọ ma ana m echegbu onwe m n'ihi na ọ na-ekpo oke ọkụ. Ya mere tinye ihe nkedo Xubuntu 12.04. M na-enyocha mgbe niile iji CPU na ebe nchekwa mara ihe na-eme, na naanị nsogbu m nwere ugbu a bụ na mgbe m na-agba vidiyo na Firefox na CPU na-aga 100%. Nbudata ụdị 32, ọ bụ ya mere o ji ekwu mgbe ị na-ebudata ubuntu:
"Ọ bụrụ na ị nwere PC ochie nwere obere nchekwa karịa 2GB, họrọ nbudata 32-bit."
Na Ubuntu 13.10 32-bit m ga-aga jerks (ụjọ na-atụ m n'ihi ịdị n'otu), achọpụtara m distro a ma ugbu a enwere m obi ụtọ.
Ma ugbu a, m 'chọpụtara' ebe a na m ga-anwale 64-bit (na xubuntu n'ezie). Ọ ga - ekwe omume na n’agbanyeghi na m nwere naanị ebule, cpu na - arụ ọrụ yiri x64? Ọ dịkwa ịtụnanya na m n'ihi na echere m na onye nhazi m bụ otu isi. Ewoo! ihe na-egosi m na ọdụ ahụ bụ otu ihe ọ dị na nkọwa mbụ.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ọrụ gị, enyi!
Ee, ikwesighi inwe nsogbu ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọtaghị nnukwu ọdịiche gbasara ụkpụrụ ụlọ na ọsọ ọsọ, ana m ekwe gị nkwa na onye nhazi gị ga-
N'ikpeazụ, anwalewo m ya na mpempe akwụkwọ m meworo maka ule. Ọnọdụ okpomọkụ ahụ ka dị otu (55º - 65º). Ọ bụ eziokwu na cpu dị ka ọ bụghị saturate nke ukwuu, na ihe atụ nke youtube ọ bụ ugbu a na 30%. Agbanyeghị, ọ na-eme ka m cheta nke ukwuu na echere m na m ga-arapara na ọnụọgụ 32. Ugbu a, enwere m naanị firefox na-emeghe na taabụ 4 ma enwere m 2/3 nke gig nke ebulu. Daalụ maka nzaghachi!
Achọrọ m ịma data a. Daalụ maka iwu.
Zaghachi Olmo Axayacatl
ọkọlọtọ: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm joogtada_tsc pebs bts pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 cid cx16 xp
ị na-ekwu pc m bụ 64 bit? Ana m agba 32 bit
Ọ dị mfe karịa na iwu lscpu; ahịrị nke abụọ na-egosi ma microprocessor na-akwado naanị 32 bits (x86) ma ọ bụ 64 ibe n'ibe (x86_64).
Zaghachi Matías Olivera
Bụ nnọọ ezi dị ka ị na-etinye ya na ị maara tupu na aga na mpịakọta
Zaghachi jose a rodriguez
nke a bụ nsonaazụ m fpu vme sitere na pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtespl64 sse2 ss ht tm pbe nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtespl3 cm16 monitor ds_scxt pni dtesplXNUMX cmXNUMX monitor ds_ dtherm
na-akwado nsụgharị 64bit.
Nzaghachi maria teresa
Ndị Mayanis dijo
Enwere m mgbagwoju anya. Ugbu a achọpụtara m na ezigbo laptọọpụ m hụrụ n'anya bụ 64 bit, mana kernel bụ i686 (ma ọ bụ 32 bit).
M na-eji 32-bit distros. Ọ ga - emeziwanye arụmọrụ ma ọ bụrụ na m wụnye distro 64-bit?
Ugbo ala dijo
Chei, ị nwere ike idozi nke a? Enwere m otu ajụjụ ahụ
Nke a dabere na ụdị sọftụwia ị ga-eji na sistemụ ahụ, yana ego RAM na kọmputa ahụ, dị ka iwu zuru oke, ọdịiche dị n'etiti 32 na 64 bits ga-amalite ịpụta mgbe 4 GB nke RAM, ma ọ bụrụ nwere obere, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịhụ ya, ọ bụrụ na ọ dị karịa, enwere ike ime ka ọdịiche dị na mmemme mmemme dị arọ (dị ka virtualbox ma ọ bụ ụfọdụ foto ma ọ bụ usoro mmezi vidiyo), na-atụ anya na ọ na-enyere aka.
Grep flags / proc / cpuinfo pụtara m
Ngwunye Audio Pulse: applet ọhụrụ iji chịkwaa olu na GNOME
Ihe mbụ "free" Blu-Ray encoder dị!